Zvinetso zvebhizinesi & Mikana Ine Iyo COVID-19 Denda | Martech Zone
Kwemakore akati wandei, ini ndakaratidza shanduko iyi ndiyo yega inogara ichitengeswa nevashambadzi. Shanduko muhunyanzvi, masvikiro, uye mamwe magero maseru ese akamanikidzwa masangano kuti agadzirise kune zvinodiwa nevatengi nemabhizinesi.
Mumakore achangopfuura, makambani aive achimanikidzwa kuve pachena uye nevanhu mukuedza kwavo. Vatengi nemabhizinesi vakatanga kuita mabhizinesi kuti aenderane nekutenda kwavo uye tsika dzakanaka. Iko masangano aimbopatsanura hwaro hwavo kubva mukushanda kwavo, ikozvino tarisiro ndeyekuti chinangwa chesangano ndiko kusimudzira nzanga yedu pamwe nekutarisira nharaunda yedu.
Asi denda uye zvine chekuita nekukiya kwakamanikidza shanduko isingatarisirwi yatisingatombofungidzira. Vatengi vaimbonyara kutora e-commerce vakadirana kwariri. Nzvimbo dzemagariro senzvimbo dzemitambo, maresitorendi, uye mabhaisikopo emamuvhi akamisa kushanda - mazhinji akamanikidzwa kuvhara zvachose.
COVID-19 Bhizinesi Kukanganisa
Kune mashoma maindasitiri asiri kuvhiringidzwa izvozvi nedenda, kusimukira munharaunda, uye mashifts muvatengi & bhizinesi maitiro. Ini pachangu ndakaona kumwe kuchinjika kukuru nevatengi uye vatinoshanda navo:
Mumwe waaishanda naye muindasitiri yesimbi akaona makondomu uye maresitoreti akamira uye ecommerce matura akaendesa zvese zvekuraira kwake.
Mumwe waanoshanda naye muindasitiri yechikoro aifanira kutyaira zvese zvavanotengesa zvakanangana nevatengi sezvo zvikoro zvakachinjira online.
Mumwe waanoshanda naye muindasitiri yezvivakwa yekutengesa zvivakwa aifanira kukwikwidza kugadzirisa nzvimbo dzayo kuti dziwane pekugara pamhedzisiro yebasa inoshanduka apo vashandi vava kugamuchirwa kuti vashande kubva kumba.
Vanoverengeka vavanoshanda navo mumaindasitiri eresitorendi vakavhara makamuri avo ekudyira ndokuchinjisa kutora-kunze uye kutengeswa kwekutengesa chete.
Mumwe waanoshanda naye aifanira kugadzirisazve spa yake kune vashanyi vasina chete nekuchenesa windows mukati mevatengi. Isu takagadzira yakazara ecommerce uye kuronga mhinduro uye takatanga kushambadzira yakananga, kushambadzira email uye nzira dzekutsvaga dzemuno - chimwe chinhu chaakange asingambodi pamberi nekuti aive nebhizinesi rekutaura-remuromo.
Mumwe waanoshanda naye muindasitiri yekuvandudza dzimba akatarisa vanotengesa zvinhu vachikwira mitengo uye vashandi vachida mari yakawanda nekuti kuda kwekuvandudza imba (kwatinogara iye zvino uye work) iri kudyarwa zvakanyanya mukati.
Kunyangwe iyo yangu nyowani agency yaifanira kunyatso shandura kutengesa kwayo uye kushambadzira. Gore rakapera, takashanda zvakanyanya mukubatsira mabhizinesi manhamba kushandura ruzivo rwevatengi. Gore rino, ndezvese zvemukati otomatiki, kugona, uye kunyatso dhata kudzikamisa iro basa revashandi vasina kuraswa.
Iyi infographic kubva nhare360, inokwanisika SMS mupi wemabhizimusi madiki, epakati, uye makuru mabhizimusi anotsanangura kukanganisika kwedenda uye kukiyiwa kwekutanga, kutanga bhizimusi, uye mabhizinesi zvakadzama.
COVID-19's Negative Zvemari Kukanganisa
Vanopfuura makumi manomwe muzana ezvekutanga vanofanirwa kumisa zvibvumirano zvevashandi venguva yakazara kubva pakatanga denda.
Vanopfuura makumi mana muzana ekutanga vane mari yakakwana kwemwedzi mumwe chete kana mitatu yekushanda.
Iyo GDP yakabata chibvumirano 5.2% muna 2020, ichiita kuti ive yakadzika kuderera kwepasi rose mumakumi emakore.
COVID-19's Bhizinesi Mikana
Nepo mabhizinesi mazhinji ari mukutambudzika kukuru, kune mimwe mikana. Izvo hazvisi zvekujekesa denda - zvinova zvinotyisa. Nekudaro, mabhizinesi haakwanise kungokanda tauro. Idzi shanduko dzinoshamisa kune bhizinesi nzvimbo hadzina kuomesa zvese zvinoda - ingori kuti mabhizinesi anofanira pivot kuzvichengeta ivo vapenyu.
Mamwe mabhizinesi ari kuona mukana mukuchinja mashandiro avanoita.
Kugamuchira modhi yerudo kuti upe zvinodiwa uye purofiti kune avo vanoshaya.
Pivoting mashandiro kutora mukana wehuwandu hwevanhu vanoshanda kubva kumba vanoda kuendeswa kwechikafu uye zvekushandisa.
Kukurudzira kushambadzira kuchinjisa kudiwa kubva pakutyaira kushambadzira kushanya kune kushanya kwedigital ne online kuronga, ecommerce, uye sarudzo dzekuendesa.
Pivoting yekugadzira kuti ipewo zviwanikwa zvehutsanana uye zvemunhu zvinodzivirira.
Kuchinja nzvimbo dzekuvhura dzakavhurika kuita nzvimbo dzakachengeteka-kuregedza uye zvakavanzika, zvikamu zvakapatsanurwa kudzikisira kusangana kwevanhu.
Kuziva maitiro ekupindura kumamiriro ezvinhu kunogonesa kambani yako kufamba kuburikidza nedenda iri. Kuti utange, gwara riri pazasi richakurukura matambudziko auchasangana nawo kana angangodaro wakatarisana nawo nemikana yaunofunga kufunga nezvekutora.
Entrepreneurship Pakati pe COVID-19: Zvinetso uye Mikana
6 Matanho ekusimudzira Bhizinesi Rako
Mabhizinesi anofanirwa kuchinjika nekutora, kana zvikasadaro vanozosiiwa kumashure. Hatisi kuzombodzokera kune pre-2020 mashandiro sezvo mabhizimusi evatengi nemaitiro achinja zvachose. Heano matanho matanhatu ayo Mobile6 inokurudzira kuti ikubatsire kuona izvo zvinogona kuitwa nechikwata chako kuti zvirambe zviri pamberi pezviitiko zvazvino.
Kutsvaga Kwevatengi Zvinodiwa - tora kunyura kwakadzika mune yako vatengi base. Taura nevatengi vako vakanyanya uye utumire ongororo yedu kuti uone mabudiro aunogona kuita vatengi vako.
Vaka Vakaomarara Vashandi - kutsvagisa basa uye makondirakiti anogona kunge ari iwo mukana wakanakisa wekudzora mari yekubhadhara iyo inogona kukanganisa kubuda kwekambani yako.
Mepu Kunze Kwako Kwekupa Chain - Funga nezve kutadza kugadziriswa kuri kutarisana nebhizinesi rako. Ucharonga sei kubata nekushanda uchitenderedza zvinoitika?
Gadzira Yakagovaniswa Kukosha - Beyond zvako zvaunopa, taurirana zvakanaka shanduko iyo yako sangano iri kuunza nharaunda yayo pamwe nevatengi vako.
Ramba Wakajeka - gamuchira nzira yakajeka uye ine tariro yekutaurirana iyo inosimbisa munhu wese kumusoro, kuzasi, uye musangano rako anonzwisisa mamiriro ebhizinesi rako.
Digital Nokuchinja - wedzera mari yako yekudyara mune epuratifomu mapuratifomu, otomatiki, kusangana, uye analytics kukwidziridza ako mashandiro. Kubudirira kwemukati kuburikidza neruzivo rwevatengi kunogona kukubatsira iwe kukunda uye kunyange kuwedzera purofiti semabhizimusi nevatengi-zvakafanana kuchinja maitiro avo.
Tags: bhizimisiCOVID-19gdpinfographiclockdownkukiya nhambanhare360pandemicnhamba dzehoshaSMS